Iyo Conceptual iMac Dhizaina neSlim Bezels uye iyo Pro Ratidza XDR Base | Ndinobva mac
Mazuva ano hazvisi zvakaoma kuita yakanaka animated kupa. Iwe unogara pamberi peMac, rega kufungidzira kwako kubhururuka, uye neyakafanira software, mune imwe nguva iwe unogona kugadzira chero chaunoda. Kurota mahara. Unogona kugadzira foldable iPhone, kana iyo iPad ine yekumashure skrini.
Nhasi takaona iMac pfungwa iyo inogona kuve nyore kuitika mune inotevera Apple desktop makomputa. Nemagadzirirwo akafanana neazvino, ivo vane zvakapusa yakaderedza furemu uye ivo vaisa iyo Pro Ratidza XDR mira. Chinhu chinogoneka zvachose. Uye gungwa remupini rinosara.
Runyerekupe runoratidza kuti gore rino tichava naro nyowani iMac uye iMac Pro mumusika. Iyo yazvino iMac dhizaini yakashandiswa neApple kubva 2013. Uye kweanopfuura makore gumi aine yakafanana kumberi mufananidzo. Kwemavhiki pave paine runyerekupe rwekuti munguva pfupi iri kuuya maMac minis matsva, iPad Pro, uye iMacs. Vaviri vekutanga vakatotengesa svondo rapfuura.
Vagadziri vaviri, Viktor Kádár naPatrik Borgatai Ivo vakaburitsa yavo chaiyo dhizaini yeMac nyowani. 24 uye 29 inches, fomu yakatetepa, uye neiyo Pro Ratidza XDR base.
Ivo havana kushandisa chaiyoiyo midhiya. Vakazvideredza mukukora kudzikisa mutengo, nekuti kutsigirwa kumwe chete uko kunokwidza iyo Pro Ratidza XDR kungave kusingabatika mune zvehupfumi pane iMac. Rutsigiro razvino rwunodhura kubhadhara $ 999.
Kunze kwechigadziko chitsva, ivo vadzorawo dema screen bezels ku Mamirimita, kupa yakawanda iripazvino maitiro. Ivo vakawedzerawo mweya wekupinda mweya uye nekubudirira kwezwi kurira.
Kupedza kugadzira mharidzo inobata meso, vakagadzira zvimwe mifananidzo mitsva ye iMac, iyo kana uchida, unogona kuitora kubva purojekiti Behance.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Dhizaini yeMac dhizaini ine slim bezels uye iyo Pro Ratidza XDR base
Pakupedzisira "Project Catalyst" inotanga kune macOS mafomu